Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Quotes Pedia
Taariikhda dhaqangalka: Juun 29, 2019
Cinwaanka websaydhku waa: https://www.quotespedia.org.
Quotespedia ("annaga", "annaga", ama "our") ayaa shaqeeya websaydhka https://www.quotespedia.org (adeegga ').
Boggan wuxuu kugu wargalinayaa siyaasadahayaga ku saabsan ururinta, adeegsiga, iyo bixinta macluumaadka shaqsiyeed markaad booqato iyo / ama isticmaasho degelkeena iyo / ama adeegga iyo xulashooyinka aad laxiriirtay xogtaas.
Waxaan u isticmaalnaa xogtaada si aan u bixinno una wanaajino adeegga. Adigoo adeegsanaya Adeegga, waxaad ku raacsan tahay ururinta iyo adeegsiga macluumaadka si waafaqsan siyaasaddan. Haddii aan si kale lagu qeexin Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, ereyada loo adeegsaday Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay leeyihiin macno la mid ah shuruudaha iyo xaaladahayada, oo laga heli karo https://www.quotespedia.org
Waxaan soo aruurinaa dhowr nooc oo macluumaad kala duwan ujeedooyin kala duwan si aan kuu siino una wanaajiso adeeggayaga.
Inta aan adeegsanayno adeegyadeena, waxaan ku weydiisan karnaa inaad na siiso macluumaad shaqsiyadeed oo la aqoonsan karo oo loo isticmaali karo inaan kula soo xiriirno ama lagu aqoonsado ("Xogta shaqsiyeed"). Macluumaadka shaqsiga lagu garan karo waxaa ka mid noqon kara, laakiin kuma eka:
Kukiyada iyo macluumaadka isticmaalka
Waxa kale oo laga yaabaa in aan ururinno macluumaadka sida Adeega loo helo iyo loo isticmaalo ("Isticmaal Xogta"). Macluumaadka Isticmaalida waxaa ku jiri kara macluumaadka sida cinwaanka Protocol-ka ee internetka (sida cinwaanka IP), nooca shabakadda, nooca browser, boggaga Adeeggeena aad booqanayso, waqtiga iyo taariikhda booqashadaada, wakhtiga lagu kharash gareynayo bogaggaas aqoonsiga qalabka iyo xogta kale ee cudurka.
Raadinta & Macluumaadka Kukiyada
Waxaan isticmaalnaa qalabka casriga ah iyo farsamooyinka raadraaca la midka ah si loola socdo hawlaha Adeeggayaga waxaanna haynaa macluumaadka qaarkood.
Kukiyada waa faylasha oo leh tiro yar oo xog ah kuwaas oo ay ku jiri karaan aqoonsi gaar ah oo magac la'aan ah. Kukiyada waxaa loo diraa biraawsarkaaga bogga internetka oo lagu kaydiyaa qalabkaaga. Tiknoolajiyada raadraaca ayaa sidoo kale loo isticmaalaa waa jadwal, tags, iyo qoraallo si ay u ururiyaan una raadiyaan macluumaadka iyo si loo horumariyo loona falanqeeyo Adeeggayaga.
Waxaad ku baran kartaa shabakadaada si aad u diido dhammaan cookies ama si aad u sheegto marka la soo diro cookie. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan aqbalin cookies, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad isticmaasho qeybo ka mid ah Adeeggayaga.
Tusaalooyinka Kukiyada aan isticmaalno:
Kulammada Kulanka. Waxaan u adeegsanaa Shuruudaha Shuruudaha si aan u adeegno adeegeena.
Kukiyada doorbidida. Waxaan u isticmaalnaa Kukiyada Xulashada si aan u xasuusano doorbidkaaga iyo dejinta kala duwan.
Kukiyada Amniga. Waxaan u isticmaalnaa Kukiyada Amniga ujeedooyin amni.
Quotespedia waxay u isticmaashaa xog aruurinta ujeedooyin kala duwan:
Si aad u bixiso loona ilaaliyo adeega
Si aan kuugu wargalino wixii isbedel ah ee adeegyadayada
Si aad ugu ogolaato inaad kaqaybqaadato muuqaalada isdhexgalka ee Adeeggeena marka aad doorato inaad sidaas yeelato
Si aad u bixiso daryeelka macaamiisha iyo taageerada
Si loo falanqeeyo ama macluumaad qiimo leh si aan u hagaajino Adeegga
Si loola socdo isticmaalka Adeegga
Si loo ogaado, looga hortago oo wax looga qabto arrimaha farsamada
Cookie waa fayl yar oo weydiisanaya fasax in lagu dhigo kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka adag. Markii aad ogolaato, feylkaas ayaa lagu darayaa cookie-ku wuxuu ka caawiyaa falanqaynta taraafikada websaydhka ama wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ogaato goortaad booqatid degel gaar ah. Kukiyada ayaa u oggolaanaya codsiyada websaydhadu inay adiga kaaga jawaabaan shaqsi ahaan. Codsiga websaydhku wuxuu hawlahiisa u habeyn karaa baahiyahaaga, waxyaabaha aad jeceshahay ama aad jeceshahay adoo soo aruurinaya oo xusuusinaya macluumaadka ku saabsan waxyaabaha aad doorbidayso. Waxaan u isticmaalnaa buskudyada taraafikada taraafikada si loo caddeeyo bogagga loo isticmaalay. Tani waxay naga caawineysaa inaan falanqeyno xogta ku saabsan taraafikada bogga oo aan wanaajiso degelkeena si aan ugu habeeyno baahiyaha macaamiisha. Waxaan u isticmaalnaa macluumaadkan ujeeddooyinka falanqaynta tirakoobka ka dibna xogta ayaa laga saarayaa nidaamka. Guud ahaan, buskudyadu waxay naga caawinayaan inaan ku siino deg deg ka wanaagsan, adoo awood u siinaya inaan la soconno bogagga aad u aragto mid waxtar leh iyo midda aadan dooneynin. Cookie sinaba nagama siinayso kumbuyuutarkaaga ama macluumaad kasta oo adiga kugu saabsan, oo aan ahayn macluumaadka aad dooratay inaad nala wadaagto. Waad dooran kartaa inaad aqbasho ama diido cookies. Inta badan daalacashada internetka ayaa si otomaatig ah u aqbala cookies, laakiin waxaad badiyaa waad ka beddeli kartaa barnaamijka biraawsarkaaga si aad u diiddo kukiyada haddii aad doorbideyso. Tani waxay kaa horjoogsaneysaa inaad si buuxda uga faa'iideysato degelka.
Intaa waxaa sii dheer, Quotespedia waxay u isticmaashaa cookies si ay kuugu muujiso xayeysiimahaaga boggaga internetka ee kala duwan.
Waad ka bixi kartaa isticmaalka Google ee cookies-ka adigoo booqanaya Google Ads Settings.
Difaacayaasha Kooxda saddexaad
Iibiyayaasha dhinac saddexaad, oo ay ku jiraan Google, waxay u isticmaalaan cookies inay u adeegaan xayeysiinta ku saleysan booqashooyinkaaga hore ee websaydhka.
Adeegsiga Google ee cookie-ka DoubleClick wuxuu awood u siinayaa isaga iyo la-hawlgalayaasheeda inay u adeegaan xayeysiimaha adiga ku saleysan booqashooyinkaaga Quotespedia Blog iyo / ama bogagga kale ee internetka.
Waad ka bixi kartaa adeegsiga cookie-ka DoubleClick oo loogu talagalay xayeysiinta ku saleysan danta adoo booqanaya Ads Settings. (ama booqasho aboutads.info.)
Dhinacyada saddexaad ayaa adeegsan kara cookies, bekado websaydh, iyo teknolojiyado la mid ah si ay u ururiyaan ama uga helaan macluumaadka bartaada internetka iyo meelo kale oo internetka ah oo ay u isticmaalaan macluumaadkaas inay bixiyaan adeegyo cabir iyo xayeysiis bartilmaameed ah.
Macluumaadkaaga, oo ay ku jiraan Xogta Shakhsi ahaaneed, waxaa loo wareejin karaa - oo lagu hayaa - kombiyuutarada ku yaalla meel ka baxsan gobolkaaga, gobolka, wadanka ama qaanuunka kale ee dowladeed halkaas oo sharciyada ilaalinta xogta ay ka duwanaan karaan kuwa ka soo jeeda xukunkaaga.
Oggolaanshahaaga Nidaamka Qarsoodiga ah ee ku xiga soo gudbinta macluumaadka noocaas ah wuxuu u taagan yahay heshiiskaaga wareejintaas.
Quotespedia.org waxay qaadi doontaa dhamaan talaabooyinka macquulka ah ee lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in macluumaadkaaga loola dhaqmo si aamin ah iyadoo la raacayo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah oo aan wareejinta Xogtaada Shakhsi ahaaneed u dhici doonin hay'ad ama waddan ilaa ay jiraan kontarool ku filan oo ay ku jiraan amniga macluumaadkaaga iyo macluumaadkaaga kale.
Quotespedia.org waxay siidayn kartaa Xogtaada Shakhsi ahaaneed ee aaminka ah ee aaminaadda leh ee ficilka noocaas ah ay lama huraan u tahay:
Inaad u hogaansanto waajibaad sharci
Si loo ilaaliyo loona difaaco xuquuqda ama hantida Quotespedia
Si looga hortago ama loo baaro dembiga suurtagalka ah ee la xidhiidha Adeegga
Si loo ilaaliyo badbaadada shakhsiyeed ee isticmaalayaasha adeegga ama dadweynaha
Si looga hortago masuuliyadda sharciga ah
Nabadgelyada xogtaada ayaa muhiim noo ah, laakiin xusuuso inaanay jirin habka loo gudbiyo Internetka, ama habka kaydinta elektaroonigga waa 100% ammaan. Inkasta oo aan ku dadaalno in aan isticmaalno habab ganacsi oo la aqbali karo si loo ilaaliyo macluumaadkaaga shakhsiyeed, ma balan qaadi karno amniga guud.
Waxaa laga yaabaa inaan u shaqaaleyno shirkadaha iyo shakhsiyaadka sadexaad si ay u fududeeyaan adeeggayaga ("Adeeg bixiyeyaasha"), si aan u siino Adeegga anaga noo ah, si aan u fulino adeegga la xidhiidha adeega ama inaan naga caawino sidii loo falanqeyn lahaa sida Adeeggeena loo adeegsado.
Dhinacyadan saddexaad waxay heli karaan macluumaadkaaga shakhsiyeed kaliya si ay u fuliyaan hawshaan iyaga oo naga wakiil ah waxayna ku qasban yihiin inaanu u sheegin ama u isticmaalin ujeedooyin kale.
Waxaa laga yaabaa inaan u adeegsano Bixiyeyaasha Adeegga Qaybta Saddexaad si loo kormeero loona falanqeeyo isticmaalka Adeeggayaga.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan habdhaqanka asturnaanta ee Google, fadlan booqo bogga shabakadda Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Anagu ma xakamaynayno mana qabno mas'uuliyad ah mawduuca, siyaasadaha asturnaanta ama hawlaha qaybaha ama adeega sadexaad.
Waxaan kuusoo diri doonnaa ogeysiis ah email iyo / ama ogeysiis caan ah oo ku saabsan Adeeggayaga, ka hor inta isbeddelku noqdo mid wax ku ool ah oo cusbooneysiin "taariikhda wax ku oolka ah" ee sare ee Siyaasaddaan Khaaska ah.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan Siyaasaddaan Khaaska ah, fadlan nala soo xiriir:
Email ahaan: [Email ilaaliyo]